22 sano jir loo aqoonsadey haweenayda dunida ugu gaaban (VIDEO+SAWIRO) – SBC
22 sano jir loo aqoonsadey haweenayda dunida ugu gaaban (VIDEO+SAWIRO)
Bridgette Jordan, oo haweenay 22 sano jir una dhalatey dalka Mareykanka ayaa loo aqoonsadey haweenayda nool ee ugu gaaban aduunka, ka dib markii sidaasi uu u diiwan galiyey buuga waxyaabaha mucjisada ah lagu keydiyo ee Guinness World Records 2012.
Haweenaydan oo degan deegaanka Sandoval ee gobolka Illinois, ee dalka Mareykanka ayaa dhirirkeeda wuxuu noqdey 69cm oo kaliya, waxay kaloo noqotey iyada iyo walaalkeed oo 20 sano jir ah laguna magacaabo Jordan walaalaha ugu gaaban aduunka ee nool xiligan.
Jordan oo 96.5cm wuxuu aad u xiiseeyaa ciyaaraha basketball-ka iyo waliba in uu gym sameeyo, halka walaashiis Ms Jordan ay aad u jeceshay ciyaaraha loo yaqaan cheerleading & mustikada qoob ka ciyaarka.
Ms Jordan oo ka hadashey sida ay isku aragto maadama ay tahay haweenayda dunida ugu gaaban waxay tiri “Waxaan isku arkaa inaan qurxoonahay, waana wax weyn inaan ahay qof gaaban, waxaana rumeysnahay in qof kasta uu ku kalsoonaado waxa uu yahay”.
Wiilkan & gabadhan gaagaabanayaasha ah waxay la nool yihiin waalidkood waxaana ay wax ka bartaan Kaskaskia College.
Ms Jordan ayaa rikoorkan cusub ee haweenayda ugu gaaban aduunka waxay kala wareegtey haweenayda lagu magacaabo Elif Kocaman oo ku nool magaalada Kadirli ee dalka Turkiga taasi oo dhirirkeedu ahaa 72.6cm oo kaliya.
Link Video-ga hoose ka daawo haweenaydan oo laga sheekaynayo.